अबको मुख्य काम पार्टीकाे आगामी महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु नै हो- राजेन्द्र महताे (संवाद)
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्ष मण्डलको संयोजक हुन्, राजेन्द्र महतो ।
केही दिन अघि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा बसेको बैठकबाट महाधिवेशन नभएसम्म संयोजक चक्रीय प्रणालीमा हुने निर्णय भए अनुसार उनी संयोजक बनेका हुन् ।
अध्यक्ष मण्डलका सदस्यसमेत रहेका नेता महतो संयोजकको जिम्मेवारी पाएसँगै आफ्नो आगामी कार्ययोजना तथा पार्टीको काम कसरी अघि बढाउने तयारी गरेका छन् भन्ने सन्दर्भमा नयाँ पाइला डटकमले उनीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, राजपाका संयोजक महतोसँग गरिएको कुराकानीकाे सार ।
राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलको संयोजक बन्नु भएकोमा यहाँलाई सबैभन्दा पहिले बधाई छ ।
हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद ।
चक्रीय प्रणालीमा यहाँहरुको अध्यक्ष मण्डलको संयोजक नियुक्ति हुने प्रकृया अलि ढिलो गरी भएन र ?
होइन, यो एकदमै सही र नियमित ढंगबाट भएको छ । पार्टीको वैधानिक प्रावधान अनुसार चक्रीय प्रणालीमा अध्यक्ष मण्डलको संयोजक हुने सम्झौता भए अनुसार त्यो व्यवस्थालाई स्वाभाविक र सहज रुपमा कार्यान्वयन गरेका हौं ।
अब यहाँको पार्टीमा तपाईँको काम कारवाही कसरी अघि बढ्छ ?
मेरो अवको मुख्य काम भनेको आगामी महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने नै हो । त्यसका लागि मैले पार्टीको तर्फबाट गर्नु पर्ने काम अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्वक गर्नु नै हो । अबको राजपा नेपाल अझ सशक्त, सक्रिय, पारदर्शी र अनुुशासित ढंगले अगाडी बढाउने कुरामा म लागि पर्ने छु । त्यसका लागि सबैसँगको सहकार्य समदुरीको हिसाबले निरन्तर हुनेछ ।
सरकारलाई दिएको समर्थमन फिर्ता लिने र छठपछि सशक्त आन्दोलनमा जाने भन्नेसम्मका यस अघिका पार्टीगत निर्णय कार्यान्वयनको कुरा के भइरहेको छ ?
हो, अस्तिको बैठकबाट अध्यक्ष मण्डलको संयोजक तोकियो । त्यो पार्टीगत बैठक थियो तर, अध्यक्ष मण्डलको बैठक यो बीचमा अझै बसेको छैन । अब चाँडै नै अध्यक्ष मण्डलको बैठक बसेर त्यस सम्बन्धी एजेण्डामा निर्णय गर्ने छौ । र, कुन कुरामा कसरी अघि बढ्ने भनेर थप बाटो तय हुनेछ ।
सरकारसँगको आन्तरिक लबिङ केही भइरहेको छ कि छैन ?
होइन, त्यो विषयमा हामीसँग कुराकानी अनौपचारिक ढंगबाट त भएको होला । तर, त्यसको कार्यान्वयन प्रकृया कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरामा केही छलफल भएको छैन । अझ भनौँ सरकारसँग शुन्य सम्वादको अवस्था छ भन्दा पनि हुन्छ ।
केही समय अघि यहाँहरुले सरकारलाई दिनु भएको अल्टिमेटम तथा जेल जीवन बिताइ रहेका यहाँका नेता कार्यकर्ताको निशर्त रिहाइ लगायत मुद्दामा सरकार सकारात्मक बन्दै गएको भन्ने कुरा आइ रहेको छ, यो विषयलाई कसरी लिनु भएको छ ?
सरकार कुरामा गम्भीर बनेर त हुँदै नी । कामबाट सरकार गम्भीर बनेको देखिनु पर्ने होइन र ? उसको कामबाटै प्रमाणित हुने हो कि यसको काम कारवाही कति जिम्मेवार ढंगले अघि बढेको छ, त्यसबाट नै हामी विश्वस्त हुने हो ।
हामी त विगतदेखि नै यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छौँ । अव हेरौँ सरकारको पछिल्लो कदम राजनीतिक रुपमा कति सकारात्मक रुपमा अघि बढ्छ । हामी जति गम्भीर बनेर अघि बढेका छौँ त्यस अनुरुप सरकार पनि हाम्रा माग र मुद्दाका विषयमा गम्भीर बनोस् भन्ने नै हो ।
पार्टीको सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको कराका यस अघिको बैठकमा कुरा उठेको थियो, यसको प्रकृया के भइरहेकाे छ ?
सबै कुरा हेर्दा सदस्यता वितरणमा पक्कै पनि केही समस्या देखिएको जस्तो लागेको छ । हामी यसमा अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लागि रहेका छौँ । यसको समस्या समाधान गरी साधारण सदस्यता वितरणलगायत अरु कुराहरुमा आवश्यक निर्णय गरेर निर्देशिका बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेका छौँ ।
अन्त्यमा, अध्यक्ष मण्डलको बैठक अब कहिले बस्छ त ?
हामी चाँडै नै बस्ने तयारी गरेका छौँ, त्यही बैठकबाट नै सरकारलाई दिएको समर्थनलगायतका कुराकाे निर्णय गर्नेछौँ ।